Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Air Côte d'Ivoire dia mandray ny Airbus A320neo voalohany
Ity fiaramanidina farany ity dia hanatevin-daharana ny fiaramanidina Airbus misy an'i Air Côte d'Ivoire misy fiaramanidina enina
Ilay mpitam-bolan'ny Ivory Coast dia mandray ny A320neo voalohany
Air Cote d'Ivoire dia manana fiaramanidina folo
A320neo Family dia manome 20 isan-jato amin'ny tahiry solika sy CO2 fampihenana
Air Côte d'Ivoire, mpitondram-baovaon'ny Ivory Coast monina any Abidjan, dia nanatitra ny A320neo voalohany, lasa mpandraharaha voalohany amin'ny karazany any amin'ny faritra Andrefana-Afrika. Ity fiaramanidina farany ity dia hanatevin-daharana ny fiaramanidina Airbus misy an'i Air Côte d'Ivoire misy fiaramanidina enina.
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny haavon'ny fahombiazany, ity fiaramanidina vaovao ity dia haparitaka amin'ny tambajotram-paritry ny Air Côte d'Ivoire hanompoana an'i Senegal, Gabon ary Cameroun. Ireo toerana kendrena toa an'i Afrika atsimo dia ho ampiana amin'ny dingana manaraka, izay manasongadina ny fahafaha-miasa amin'ny A320neo. Powered by CFM Leap-1A maotera, ny fiaramanidina dia namboarina tamina lamina kilasy roa mahafinaritra miaraka amin'ny seza 16 ao amin'ny Business ary seza 132 ao amin'ny Economy Class. Ny mpandeha dia hahazo tombony amin'ny tranokala malalaka indrindra amin'ny sidina arofanina tokana, ny fifandraisana Internet haingam-pandeha ary ny rafitra fialam-boly ankafiziana farany.
Ny A320neo voalohany an'ny Air Cote d'Ivoire dia niainga avy tany Toulouse izay nitondra entana an-taonina 1 taonina, anisan'izany ny fitaovana fitsaboana sy kilalao. Miara-miasa amin'ny Aviation sans Frontières sy ny Airbus Foundation, ity iraka ity dia ampahany amin'ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy ataon'ny orinasa Air Côte d'Ivoire. Ireo entana nafarana dia hanompo ONG eo an-toerana any Abidjan, ka hanohana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana eto amin'ny firenena.
Air Cote d'Ivoire dia manana fiaramanidina folo, ao anatin'izany ny A319 telo sy ny A320 telo, izay manompo any amin'ny 25 sy ny faritra isam-paritany any Afrika Andrefana sy Afovoany.
Ny A320neo Family dia mampiditra ny haitao farany indrindra ao anatin'izany ny motera vaovao, Sharklets ary aerodynamika, izay miaraka manatitra 20 isan-jato amin'ny tahiry solika sy CO2 fihenam-bidy. Ny A320neo Family dia nahazo baiko 7,450 tamin'ny mpanjifa efa ho 120.